FARITRA AMBANJA : Mihem-bidy ny vokatra dipoavatra, velon-taraina ireo mpamboly
Misedra olana goavana tanteraka ireo mpamboly dipoavatra any amin’ny Distrikan’Ambanja amin’izao fotoana izao raha toa ka tsy misy mpividy intsony ireo vokatra nampalaza azy ireo tamin’ity taona ity. 10 octobre 2017
Araka ny loharanom-baovao voaray mahakasika izany dia fantatra fa nidina ho eninjato Ariary ny kilao ny dipoavatra ao an-toerana ankehitriny noho ny tsy fisian’ny mpividy sy ireo mpandraharaha. Toa zary samy manao izay handafosany ireo vokatra sisa ny ataon’ireo mpamboly ary tena kivy tanteraka izy ireo manoloana izay antony izay.
Tsy ny dipoavatra ihany anefa no ratsy vidy tahaka izao raha ny tatitra fa na ny vokatra “cacao,mahabibo” dia torak’izany hatrany. Eninjato Ariary daholo ny kilao raha toa ka tokony ho efatra arivo eo ny tena vidiny. Vokany, manao antso avo amin’ny ministeran’ny Varotra sy ny fambolena ny vondron’ireo tantsaha noho izay fahasahiranana izay. Miangavy izy ireo ny amin’ny fidinana ifotony ataon’ny tompon’andraikitra ary mba hitady vahaolana maharitra ho an’ireto tantsaha satria voatohintohina loatra ny antom-pivelomana.
Raha izao no mitohy, hoy ny fijoroana vavolombelona ataon’ireo mpamboly sasantsasany dia ho kivy tanteraka izy ireo ka hijanona ny tsy hamokatra intsony noho ny fatiantoka.